Covid19-Fiarovana ny mpiasa; 36,85 tapitrisa euro avy amin’ny BAD - ewa.mg
News - Covid19-Fiarovana ny mpiasa; 36,85 tapitrisa euro avy amin’ny BAD
CAN 2019: Miroso any Cameroun ny dian’ny Barea
Nandresy an’i Nzalang Nacional tamin’ny isa 1 no 0 ny Barea tany amin’ny Kianja Nkoantoma omaly Sabotsy 13 Oktobra 2018. Miroso mankany amin’ny CAN 2019 atao any Cameroun ny dian’ny Barea tao aorian’ny fandresena azony ny andro fahatelo iny. Baolina nampidirin’i Faneva Ima tamin’ny 18 minitra fidirana voalohany. « reprise de volée » nalefany elatra ankavia no nampidirany azy. Tsy vitan’ny ekipan’i Guinée-équatorial izay notarihan’i Angel Lopez teratany Espaniola ny nahasahalana ny isa io. Ho fandraisana anjaran’’ny Barean’i Madagascar ny CAN 2019 atao any Cameroun raha mitohy izao fandresena izao. Ho atao eny Vontovorona rahampitso Talata 16 Oktobra 2018 ny lalao amin’ny andro fahaefatra amin’ity fifanintsanana ity. Azo antoka ny fiankarana any amin’ity CAN 2019 ity raha toa ka mandresy ny Guinée-équatorial i Madagasikara amin’io andro io. Voalohany amin’ny tantaran’ny baolina kitra malagasy noho izany io CAN 2019 atao any Cameroun io. Mbola mitarika amin’ity vondrona A misy an’i Madagasikara ity ny Senegaly raha nandresy an’i Soudan tamin’ny isa 3 no 0 omaly Sabotsy 13 Oktobra 2018 izay natao tany Senegal. Mijanona ho laharana faharoa hatrany noho izany ny Barean’i Madagasikara. Nirina R. Cet article CAN 2019: Miroso any Cameroun ny dian’ny Barea est apparu en premier sur déliremadagascar.
Voasambotr’ireo Tafika manao fisafoana amin’ny alina, eny Analakely ny lehilahy iray 31 taona manao fanamiana miaramila, afak’omaly. Avy nanao fisafoana tany Isotry ireto miaramila nahita io lehilahy io teo Analakely. Tsikaritr’izy ireo ny tsy fetezana teo amin’ny galonany, ka nahatonga azy ireo hanadihady. Nilaza ho serzà-sefo io lehilahy mpisandoka io. Naterin’ireo miaramila tao amin’ny kaomisarian’ny polisy boriborintany voalohany avy hatrany io mpisandoka io. L’article Miaramila sandoka est apparu en premier sur AoRaha.
Fampindramam-bola Cnaps : manodidina ny 200.000 ny hahazo
Nitondra ny fanazavana antsipiriany ny tale jeneralin’ ny CNaPS, Rakotondrainibe Mamy, mikasika ilay fampindramam-bola ho an’ny mpiasa tsy miankina. Tsy manatona mi­vantana eny amin’ny CNaPS ny orinasa fa amin’ny alalan’ ny “internet” ny fikarakarana ny fangatahana. Miisa telo ny taratasy fenoina, hita ao ana­tin’ny adiresy internet-n’ny CNaPS, hoe “Fanampiana avy amin’ny CNaPS”. Voalohany, taratasy fenoin’ny mpampiasa mombamomba azy. Faharoa, ny mombamomba ny mpiasa miampy ny laharana bankiny, finday, laharana vola amin’ny finday (mobile banking), sns. Fahatelo, ny fifanarahana ataon’ny mpampiasa amin’ny CNaPS, milaza ny anaran’ny mpiasa misitraka ny findramam-bola. Mitentina 200.000 Ar ha­tramin’ny 500.000 Ar ny vola azo indramin’ny mpiasa tsirairay. Honerana tsikelikely ny 8,5% isam-bolana, mandritra ny 12 volana. Raha sendra miova asa ilay mpiasa, tohizana any amin’ny orinasa vaovao iasany ny fanonerana. Raha tsy miasa intsony izy, misy taratasy fenoina ho antoka fa handoa ny vola. Mivaly ao anatin’ny fito na valo andro ny fangatahana, manomboka amin’ny alatsinainy 17 aogositra hatramin’ ny 30 septambra.Misy sokajy teloMisy karazany telo ny fa­nasokajian’ny CNaPS ny mpikambana ao aminy. Voalohany, antsoina hoe “circuit vert”, ireo orinasa nahaloa latsakemboka ara-dalàna sy ara-potoana. Afaka misitraka amin’ity findramam-bola ity avy hatrany izy ireny. Faharoa, ny “circuit orange”, ireo tsy nahaloa ara-dalàna na ara-potoana, nandoa latsakemboka nefa tsy nanao filazan-karama (declaration), ohatra. Azo ahitsy izany ka ma­hazo ny fampindramam-bola ihany ny mpiasa fa mila ma­meno taratasy fahefatra ny mpampiasa, milaza fa manaiky handoa ireo latsakemboka tsy voaloa nandritra ny 24 volana. Fahatelo, ny “circuit rouge”, ho an’ireo tsy nahaloa mihitsy na zara raha nahaloa latsakemboka ka tsy afaka misitraka ity fampindramam-bola ity mi­hitsy ny mpiasa ao aminy. Mitentina 50 miliara Ar ny tetibola hatokan’ny CNaPS amin’ity fampindramam-bola ity ka manodidina ny 200.000 ny mpiasa vinavinaina hisitraka azy, manerana ny Nosy. Tsia­hi­vina fa hatao laharam-pahamehana ireo miasa amin’ny sehatra tena nisedra olana vokatry ny Covid-19, toy ny amin’ny fizahantany, ny fitaterana, ireo mpiasa tratry ny fitsaharana amin’ny asany, na ny ampahany fa tsy notapahana ny fifanarahany amin’ny orinasa, sns.Njaka AndriantefiarinesyL’article Fampindramam-bola Cnaps : manodidina ny 200.000 ny hahazo a été récupéré chez Newsmada.
VHT: « Tsy madio ny voka-pifidianana »
Nivoaka amin’ny fanginany ny fikambanana VHT, tarihin-dRazanakoto Norbert. Nohitsin’izy ireo fa tsy araka ny tokony ho izy ny voka-pifidianana navoakan’ny Ceni ny faran’ny herinandro teo. “Tsy afaka ny hangina manoloana ny firenena izahay. Hitanay fa misy tsy mitombina ny voka-pifidianana navoakan’ny Ceni. Niovaova ny fotoana tokony hamoahany izany. Nambara fa ny 20 novambra. Avy eo indray, navoaka tampoka amin’ny andro alina ny asabotsy teo… Inona ny marina momba izany ?”, hoy izy ireo tetsy Andrefan’Ambohijanahary, omaly. Nanterin’ny VHT fa ho tompon’andraikitra amin’ny ataony sy ny tsy mety ny Ceni. Nametra-panontaniana izy ireo raha tena mahaleo tena marina na tsia ity rafitra mpikarakara fifidianana ity. “Tsy afa-bela amin’ny korontana mety hiseho ny manodinkodina ny safidim-bahoaka ary hiteraka savorovoro izany”, hoy ihany izy ireo. Miantso ny HCC ny VHT handeha amin’ny fahamarinana amin’ny famoahana voka-pifidianana tena izy sy marina. “Aleo handresy ny mpandresy na ho fihodinana voalohany na ho faharoa”, hoy izy ireo. Synèse R. L’article VHT: « Tsy madio ny voka-pifidianana » a été récupéré chez Newsmada.
Volley: nanomboka fanazarantena ny Stef’Auto
Rehefa samy nikotrana samy irery tany amin’ny toerana nisy azy, nandritra ny fotoana naharitra, ireo mpilalaon’ny Stef’Auto Toamasina, taranja volley ball, nanapa-kevitra namerina ny fanazarantena amin’izay ny mpanazatran’izy ireo. Araka izany, niverina, nanomboka ny fiandohan’ity herinandro ity, izay fanazarantena iraisana izay. Nambaran’ireo mpilalao fa efa ela ny niandrasana izao fiarahana mikotrana izao. “Tsy nanahirana ihany koa ny fanombohana satria hita ho efa samy nanoman-tena mafy tany an-trano izy ireo”, hoy ny mpanazatra. Na izany aza, mila hamafisina hatrany ilay fahaiza-miaraka somary very kely nandritra ny fihibohana. Misy mpilalao vaovao rahateo nantsoina hanatevin-daharana ny ekipa ka tena ilana teknika tsara eny ambony kianja. Nohamafisin’ny mpanazatra fa mbola eo am-pamitana ny “mutation” an’ireo mpilalao vaovao ireo izao ka aorian’izay vao holazaina amin’ny fomba ofisialy ny anarana sy ny klioba niavian’izy ireo.Etsy ankilany, manomana fivoriana maika amin’izao ny federasiona malagasy ny volley ball, handinihana ny fandaharam-potoana, taorian’ny nahenoana ilay fanambarana nataon’ny filoha Rajoelina Andry, amin’ny fahafahana manatanteraka hetsika fanatanjahantena. Hisy ny vaovao hampitaina aorian’izay, raha ny fanazavana. Mi.RazL’article Volley: nanomboka fanazarantena ny Stef’Auto a été récupéré chez Newsmada.
Andriambavilanitra 5, poetan’ny ankehitriny no hitondra ny “Hanitr’i Eva” etsy amin’ny sekoly Cendrillon Soavimasoandro, ny alahady 1 novambra, manomboka amin’ny 1 ora tolakandro. Hitondra ny fijeriny mahakasika an’i Eva izy ireo amin’io fotoana io. “ Tsy i Eva ilay namadika an’i Adama akory ny vehivavy… Manana ny hanitra ho azy ihany koa i Eva, ary havoitranay ao anatin’ny sanganasa izany”, hoy i Tsiaro ny Fitia. Lohahevitra maro no holalaovina amin’io andro io. Fitiavana misandrahaka amin’ny alahelo, ny ranomaso, ny tsiky, ny fahafatesana. Hovelomin-dry Tsiaro, Miritsoka, Antso fy Tia, Natiora ary i Larissa Ramanitriniaina izany. Eo koa ny fanentanana sy ny fandravahana ny seho amin’ny alalan’ny dihy, iarahana amin-dRabefitia. Raha ny 26 marsa 2020 teo no saika hanaovana ny seho “Hanitr’i Eva”… Nihantona izany noho ny hamehana ara-pahasalamana sy ny fihibohana vokatry ny fidiran’ny valanaretina teto ary izao hotanterahina izao amin’izany.NarilalaL’article “Hanitr’i Eva”: poeta 5 vavy hamelona ny antsa a été récupéré chez Newsmada.